how to put target URL for domain name.... — MYSTERY ZILLION
how to put target URL for domain name....
May 2012 edited May 2012 in Wordpress
မေးရမှာလဲ ဘယ်လိုခေါင်းစီးပေးပြီး မေးရမှန်းမသိလို့ပါ..ပြီးတော့ ဘယ်နားမှာသွားမေးရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲ မေးလို်က်တာပါ..
ဒီလိုပါ..ကျွန်တော် co.cr မှာ တခုလုပ်လိုက်တယ် အဲဒါ target url တောင်းတယ်ခဗျ အဲဒါတခြားဆိုဒ် တခုကိုပေးခဲ့တယ်...
နောက်တော့ http://box7.host1free.com မှာ အဲဒီ registered domain name နဲ့ပဲfree registerလုပ်ကြည့်တယ်.. လုပ်လို့ရတယ်..
ပြီးတော့ wordpress ကို upload လုပ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်register လုပ် ထားတဲ့ domain name နဲ့ ၀င်ကြည့်တယ် ဘာမှ မပါ်ဘူး
wordpress ကိုဘယ်နားက run ရမလဲ မသိတော့ဘူး
အရင် တခါ free hosting site မှာ သူပေးထားတဲ့ subdomain နဲ့ လုပ်ကြည့်တယ် အဲဒီအချိန်မှာအဲဒီ subdomain နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်
ပြီးတော့ co.cr ကို အဲဒီ subdomain ကို target url ပေးလိုက်တယ်..အဲဒီဆိုဒ်ကိုကြည့်လို့ရတယ် co.cr ရော subdomain နဲ့ပါ ၂ခုလုံးနဲ့
ဖွင့်လို့ရတယ်.ဒါပေမယ့် wordpress ကို ၀င်မယ်ဆိုရင် တော့ co.cr နဲ့ကြတော့ မရတော့ပြန်ရော..subdomain နဲ့ပဲwordpress ကို၀င်လို့ရတယ်
အဲလိုမျိုး url နှစ်ခုနဲ့ မ၀င်ချင်ဘူး..ပြီးတော့ ကျွန်တော်free register လုပ်ထားတဲ့ co.crနဲ့ပဲ wordpress ကိုတိုက်ရိုက် ကလိချင်တယ်
.ကျွန်တော်ထင်တာtarget url ပေးတာမှားလို့..ဒါပေမယ့်target url ကိုဘယ်url ဆီညွန်းပေးရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့တခြားဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရင် ရနိုင်မလဲ မသိဘူး..အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီကြပါအုံး.
ကျွန်တော်ဘာမှ မသိဘူး မတတ်ဘူးနော် ရှင်းပြရင်လူပိန်းတွေနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးကြပါလို့ အကူညီတောင်းချင်ပါတယ်ဗျာ..(ထပ်ထပ်မေးရမှာအားနာလို့ပါ ဟီး)
did you add DNS in your domain control ?
Sorry! ဗျာ ကျွန်တော်မေးတာမှားသွားတယ် co.cr မဟုတ်ဘူး..http://www.freedomain.co.nr/ မှာပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော် co.cc မှာ တခုပြန်လုပ်မှ နဲနဲအထာသိသွားတယ်.. co.nr မှာက website ရှိပြီးသားကိုအဲမှာသုံးမယ်ဆိုပြီး register လုပ်မိလိုက်လို့ခုလိုကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာ.. အဲဒါကြောင့် target url တောင်းတာကိုး.co.cc နဲ့လုပ်တော့ ရလိုက်ပါပြီ ဒါပေမယ့် ခုက www.myname.co.cc နဲ့ home page တခုတည်းပေါ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတဲ့ သဘောတရားလေးပြောပြပေးကြပါလား..ခုက www.myname.co.cc/wordpress နဲ့ပဲ home page ပေါ်နေတယ်.. ပြီးတော့ကျွန်တော် wordpress ကပြောသလို ပြောင်းကြည့်တာ နားမလည်တာနဲ့ မှား သွားတယ်ထင်တယ် ခုက ဘာနဲ့ ခေါ်ခေါ် မရတော့ဘူး http://error404.000webhost.com/? ဆိုပြီးပဲ လာလာပြနေတယ် ပြောင်းလဲမပြောင်းတတ်တော့ဘူး..ကူညီကြပါအုံးဗျာ..
ကို latGyi ပြောတာကို ကျနော်တချို့နေရာ နားလည်တယ် ၊ တချို့နေရာလဲ မရှင်းဘူးဗျ ။ ကျနော်ကလဲ ခပ်ဝါးဝါးလေ...
အထက်က ကိုစေတန်ပြောသလိုပဲ domain တခုကို မိမိ host နဲ့ ချိတ်မယ်ဆိုရင် မိမိ Host ရဲ့ DNS name ကို
မိမိ domain server ရဲ့ domain management section မှာ add လုပ်ပေးရမယ် ။ အဲလိုမှ dns မချိတ်ရင်မရပါဘူး ။ ဆိုလိုတာက freehostia.com ရဲ့ dns (domain name server) name က dns1.freehostia.com ဆိုပါတော့ ။Hosting တိုင်းမှာ dns name တွေရှိပါတယ် ။ရှာကြည့်ပါ။ acc စလုပ်လုပ်ချင်း ပို့လိုက်တဲ့ မေးလ်မှာလဲ ဒီ information တွေပါပါတယ် ။ ဥပမာပြောတာနော် ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီ dns ကို မိမိ domain control မှာ ထည့်လိုက်ပါ ။ အဲလိုချိတ်လိုက်မှ အဲဒါကို သုံးလို့ရမှာပါ ။ တခါက ကျနော်ချိတ်တုန်းက active ဖြစ်ဖို့ server က 24 hours လောက် စောင့်ရတာမျိုးလဲရှိတယ် ။အဲဒါလဲသတိထားအုံး ။
ဒါပေမယ့် ခုက www.myname.co.cc နဲ့ home page တခုတည်းပေါ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတဲ့ သဘောတရားလေးပြောပြပေးကြပါလား..ခုက www.myname.co.cc/wordpress နဲ့ပဲ home page ပေါ်နေတယ်.. ပြီးတော့ကျွန်တော် wordpress ကပြောသလို ပြောင်းကြည့်တာ နားမလည်တာနဲ့ မှား သွားတယ်ထင်တယ် ခုက ဘာနဲ့ ခေါ်ခေါ် မရတော့ဘူး http://error404.000webhost.com/? ဆိုပြီးပဲ လာလာပြနေတယ် ပြောင်းလဲမပြောင်းတတ်တော့ဘူး..ကူညီကြပါအုံးဗျာ..
အဲလိုပေါ်ချင်တာက မခက်ပါဘူး ။ ကျနော်တခုပြောပြမယ် ။ local မှာ လုပ်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော် ။ ကျနော်တို့ wordpress file ကို www folder အောက်မှာ zip ဖြေပြီးထည့်လိုက်တယ် ။ အဲဒီအခါမှာ www ရဲ့ အောက်မှာ wordpress ဆိုပြီး folder တခု ထပ်ရောက်လာတယ် ။ အဲဒီထဲမှာမှ wordpress နဲ့ဆိုင်တဲ့ folder တွေ၊ file တွေရှိတယ်လေ။ အခုအတိုင်းခေါ်ရင် http://localhost/wordpress ဆိုပြီးခေါ်ရမယ်လေ ။ အဲဒါ http://localhost ဆိုပြီး ခေါ်ချင်ရင်တော့ wordpress ဆိုတဲ့ folder ထဲက ဟာတွေကို အပြင်ထုတ်လိုက်ပြီး wordpress folder ကိုဖျက်လိုက်ပေါ့ ။ အဲမှာ သတိထားရမှာက www မှာ သူ့ မူလ index.php ဖြစ်စေ html ဖြစ်စေရှိနေမှာပေါ့ ။ အဲဒါကိုဖျက်လိုက် ။ ဒါဆို http://localhost လို့ခေါ်လိုက်ရင် wordpress ရဲ့ index.php ကို လှမ်းခေါ်ပြီး ဆိုဒ်တက်လာလိမ့်မယ် ။ web ပေါ်မှာလဲ ဒီသဘောပဲလေ ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ wordpress ကို rename လုပ်ပြီး myblog လို့ ထားလိုက် ၊ မူလရှိနေတဲ့ index ကို မိမိကြိုက်သလို ပြင်ဆင်လိုက် အဲဒီ home page မှာ စောစောက wordpress ရဲ့ link ကို menu တခုအနေနဲ့ထားလိုက်ပေါ့ ။ ဒါဆို homepage လေးက သက်သက်၊ blog လေးက သက်သက် ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ဟီး....မဟုတ်တရုတ်အကြံပေးကြည့်တာပါ ။ အစ်ကိုမေးထားတာနဲ့ ကျနော်ဖြေထားတာလွဲနေရင်လဲ ပြောပါ ။ သိသလောက် ထပ်ဆွေးနွေးပါ့မယ် ။
error တက်သွားပုံကတော့ ကျနော်လဲ ပြောယုံနဲ့ မသိနိုင်ဘူး ။ အစ်ကို ဘယ်လိုလုပ်လို့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားပုံကိုသေချာပြောပြရင်တော့ ဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မယ်ထင်တာပါပဲ ။
host ရဲ့ DNS name ချိတ်တာတွေ ရသွားပါပြီ..ကျွန်တော်အရင်စမေးတာနဲနဲ လောသွားတာပါ..co.nr နဲ့ register လုပ်တော့ Yes, I already haveasite/blog/forum where to forward my .co.nr domain နဲ့ No, I want to createaweb site at .co.nr domain ဆိုပြီးရွေးခိုင်းတယ်ဗျ အဲဒီမှာ ဒုတိယ ဟာ ရွေးရင် ၀င်လို့မရလို့ အပေါ်ကဟာကို ရွေးပြီးလုပ်လိုက်တာ..ကျွန်တော်လဲ လုပ်တာလုပ်လိုက်တယ် ဘယ်ဟာရွေးပြီးလုပ်လိုက် မှန်းလည်းပြန်
သတိ ထားမိလို့ပါ နောက်တော့ DNS name လည်းမတောင်း.. DNS name တောင်းတတ်မှန်းလည်းမသိသေးတာပါ.ပြီးတော့ target url လာတောင်းနေလို့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာ hosting site ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းနဲ့ ဆိုရင်ဒါနဲ့ ဆက်ဆိုပြီးDNS name ချပေးတော့အဲဒါကို ဒိုမိန်းမှာဆက်ကြည့်တော့လည်းerror. အဲဒါနဲ့ co.cc နဲ့တခြားတခုလုပ်ကြည့်မှ သဘောပေါက်သွားတယ် ပြီးတော့ co.nr ကိုပြန်သွားပြီး အဲဒီမှာက ဘာလို့ DNS name မတောင်းတာလဲဆိုပြီး ပြန်ပြီးနောက်တခုဖွင့်ကြည့်တော့မှ ကျွန်တော် အရွေးမှားမှန်းသိသွားတယ်ဗျာ..
localမှာတော့ internetပေါ်စမ်းကြည့်ပြီးမှ ခု ၁ရက်ပဲရှိသေးတယ်စမ်းနေတာဟီး http://localhost/wordpress နဲ့ပဲ..ကျွန်တော်က အလုပ်မှာ internet
အလကားသုံးရလို့ အဲဒီမှာပဲ စမ်းဖြစ်တာပါ.ဒါလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးတဲ့ သဘောပါ သိပ်ကြီးဘလော့ဂ်တာဝါသနာပါလို့လဲ မဟုတ်ပါဘူး..ခုမှ css လေ့လာနေတုန်းပါ...လွန်ခဲ့တဲ့၃.၄နှစ်လောက်က လည်းc++ နဲ့ java ကိုရောင်ဝါးလုပ်ခဲ့သေးတယ် ဒီလိုပဲဘာမှရေရေရာရာမသိခင် လက်လျှော့ခဲ့မိတယ်အဲဒါလဲအခြေနေကြောင့်လဲပါတာပေါ့.. ခုလဲအဲဒါကိုနောင်တရနေလို့ လုပ်ကြည့်မလို့စလေ့လာတာပါ အခုလဲ အလွယ်တကူလက်လျော့မိမှာစိုးလို့ ဘလော့ဂ်လေးလည်းကြည့်တာ domain,hosting, wordpress ဆိုတာ ဘာတွေလဲသိချင်လာလို့လဲပါတာပေါ့...ဒါပေမယ့်ခုက ဘေးမှာမေးလို့ရမယ့် သူက တယောက်မှမရှိတော့ အလွယ်လေးဟာတောင်မှ နားမလည်ပဲအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေတာပါ..ခုလိုဒီဖိုရမ် လေးမှာမေးခွင့်ရသလို ကူညီပြီးဖြေကြားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အရမ်းလဲအားတက်မိပါ တယ်ဗျာ..
error တက်သွားတာက wordpress ထဲက settings/general မှာ WordPress Address (URL) နဲ့ Site Address (URL) ကို ကိုယ်ပြင်ချင်တာပြင်ထဲ့လိုက်လို့ error တက်သွားတာပါ..error တက် လို့ <a href="http://codex.wordpress.org/Giving_WordPress_Its_Own_Directory "target="_blank">http://codex.wordpress.org/Giving_WordPress_Its_Own_Directory</a&gt; မှာပြောတဲ့အတိုင်းကလိကြည့်တာမှားသွားတယ်ထင်တယ် ပြန်ပြင်လို့ကိုမရတော့တာ(site ကို delet ပြီး ပြန်အသစ်စမ်းကြည့်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်)
ကို godhand ပြောသလိုလည်းစမ်းကြည့်ပါအုံးမယ်ဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့....ရပါတယ် ။ အဆင်မပြေရင်ရင်ပြောပါ။ကျနော်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပါ့မယ်။ အမှန်က wordpress ကို upload တင်ပြီး၊ install လုပ်ခါနီး ရင် ဘယ် နေရာမှာ ထားမလဲဆိုပြီး directory ကိုတောင်းပါတယ်။ ဥပမာ ။ ။ http://my.host.com/htdocs/wordpress အဲမှာထားမလားပေါ့ ။ ဥပမာပြောတာနော် ။ သေချာသတိထားကြည့်ပါ။ အစ်ကို အနေနဲ့ wordpress ကိုဖျက်ပေးလိုက်ရင် သူက htdocs အောက်မှာ ထားလိမ့်မယ် ။ htdocs ကို တချို့ host မှာ www လို့လဲခေါ်တယ်ဗျ ။ ဒါဆို အစ်ကိုဖြစ်ချင်သလို မိမိ domain (or) sub-domain ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ blog ကျလာမှာပါ ။ အဆင်ပြေပါစေကြာင်း..........။